Home Ulo oru Europe Mason Holgate Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Mason Holgate Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ. Ebe E Si Nweta: Picuki na TheSun
Na-amalite, aha otutu ya bụ “Masey“. Anyị na-enye gị mkpuchi zuru ezu nke Akụkọ Mgbakọ Holgate, Akụkọ ndụ, Eziokwu Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Ndụ mbụ na ihe omume ndị ọzọ ama ama malite mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ndụ mbu na mbilite nke Mason Holgate. Ebe E Si Nweta: TheSunUK na WalesOnline
Ee, onye ọ bụla maara Holgate maka nke ya ụdị egwuregwu- Ejiri njikwa ọnụ & ịgbachitere njikwa. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị Mason Holgate's Biography nke mara mma nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Akụkọ gbasara Mason Holgate
Mason Holgate ezinụlọ Mụrụ
Mason Holgate Mmụta na Ọrụ Buildup
Mason Holgate Biography- Roadzọ Ya Si Akụkọ Ama
Mason Holgate Biography- Nrute Ya banyere Akụkọ Ama
Ọnye na-bụ Mason Holgate Girlfriend?
Mason Holgate Ndụ onwe
Eziokwu Ezinaụlọ Mason Holgate
Ihe ndi ozo banyere nne Mason Holgate
More banyere papa Mason Holgate
More banyere Nwanna Nwanyị Mason Holgate
Mason Holgate Ndụ
Mason Holgate Eziokwu
Eziokwu nke mbụ: Nkwụsịtụ ụgwọ ego ụgwọ Mason Holgate
Eziokwu # 2: Ike Mason Holgate FIFA
Eziokwu # 3: Akụkụ nke ọzọ nke Mason Holgate
Eziokwu # 4: Mason Holgate's Tattoo
Eziokwu # 5: Mason Holgate's Religion
Mason Holgate Akụkọ Nwata
Malite, aha ya zuru oke bụ Mason Anthony Holgate. A mụrụ onye egwuregwu bọọlụ Bekee n’ụbọchị 22nd nke Ọktoba 1996 n’isi nna ya, Tony Holgate na nne ya (aha amaghi) n'obodo Bekee Doncaster, United Kingdom. A mụrụ obere Mason dị ka nwa nke abụọ na nwa nwoke mbụ nne na nna ya mara mma. Foto dị n'okpuru, Masey nke anyị toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke okenye nke aha Tayler.
Mason Holgate nọrọ na nwanne ya nwanyị Tayler ọtụtụ oge. Ebe E Si Nweta: Picuki
Tolite na Northern England bụụrụ ọmarịcha ahụrụ nwanne na nwanne. Nwa Mason enweghi nwanne ya nwanyị nke okenye (Tayler) gbara ya gburugburu dika nwata. O mewo ka akụkụ ụfọdụ nke ndụ ya na ụfọdụ ezigbo enyi nwa. Foto dị n'okpuru, nwa Mason (gbara afọ 2) ọ dị ka ahụ enwere ya n’elu sọks ụlọ ya na ezigbo enyi ọ mụrụ nwata.
E sere foto Mason Holgate nwata, lee, a na-ese onyinyo onye ọdịnihu nke England n'akụkụ ya na ezigbo Enyi ya. Ebe E Si Nweta: Picuki
Mason Holgate Ezigbo Ezinụlọ
Na-ekpe ikpe site na njiri mara mma ya mara mma, ị ga-ahụ na usoro ọmụmụ Holgate abụghị naanị Bekee. Eziokwu bu, o nwere agwa ndi puru iche nke n’egosi na o nwere ike sitere na nkpuru ezin’ulo bekee na nke ndi Africa. Ị maara?…, Mason Holgate bụ n’etiti ndị egwuregwu ịgba ama ama; Alex Oxlade-Chamberlain, Max Erọn, Kyle Walker na Chris Smalling, wdg ndị nwere ezinụlọ Jamaican na Britain. Otu n'ime nne na nna Mason Holgate- nna ya si na Jamaica ebe nne ya bụ onye Britain.
Zute ndị nne na nna Mason Holgate foto n'akụkụ nwanne ya nwanyị, Tayler Holgate
Amụrụ na England, mmekọrịta Mason Holgate na mba agwaetiti Caribbean (Jamaica) si n’aka ndị nna nna ya. Nke a pụtara na nna ya (Tony Holgatemụrụ na England (Akuko Wikipedia).
Mason Holgate Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'ịbụ ndị tolitere na South Yorkshire, Holgate nwere mmasị mgbe niile n'egwuregwu bọọlụ were were n'ọrụ kemgbe ọ bụ nwata. Ọ bụ ụdị nwa na-achọghị ihe ọ bụla MA naanị bọọlụ bọọlụ dịka onyinye. Iji nye ya ihe ọ chọrọ, Ndị nne na nna Mason Holgate kwetara maka nwa ha nwoke sonye na ngalaba agụmakwụkwọ nke ụlọ ezinụlọ ha - Barnsley mgbe ọ dị afọ 9. Ọchịchọ ọ na-achọ maka agụmakwụkwọ football na klọb dị nso na ezinụlọ nwere mmetụta Performace ya dị ka nwata.
Foto nwata bụ Mason Holgate- N'oge ahụ o sonyere Barnsley dị afọ 9. Ebe E Si Nweta: DailyMail
Ka ọ na-aga n’ihu n’usoro agụmakwụkwọ klọb ahụ, nwata ahụ a zụrụ azụ nke ukwuu siri ike ịgbaso nzọụkwụ ya John nkume onye o mere ihe na ndi umu akwukwo akwukwo Barnsley guru akwukwo. nkume dị afọ atọ n'ihu Mason.
Mason Holgate Biography- Roadzọ Ya na Akụkọ Ama Ama
Nwa oge Mason gụsịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ ya, ọ malitere ịkụ ala. Nwa na-eto eto na-eto eto nwere ọmarịcha uto mbụ nke ndị football. Mgbalị ya mere ka etinyere ya ka ọ bụrụ nwata egwu bọọlụ n'afọ a. Oge ahụ 2014/2015, Holgate gosipụtara ọkwá ya n'ọtụtụ oge, njiri dọtara ndị klọb kachasị elu na England.
Onye egwuregwu Bekee-Jamaican nwere mmetụ meteoric n'ụlọ ezinaụlọ ya Barnsley FC
Mgbe ọtụtụ nrụgide gasịrị, Barnsley gbara arụkwaghịm ịhapụ Holgate ịhapụ Everton na ọnụ ahịa ziri ezi. Onye na-agbachitere Yorkshire gbasoro nzọụkwụ nke onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Barnsley mbụ John Stones.
Isonye na Toffees maka ego mbufe ego nke nde £ 2, mere Mason kwere nkwa ibi ndu karia ihe aturu anya ya. Ọ joyụ nke ndị otu ezi-na-ụlọ Mason Holgate amabeghị oke n’oge akpọrọ nke ha ka ha ịnọchite England U20 n'otu oge o sonyere na Everton.
Egwu: Ị maara?… Holgate tụrụ egwu na ohere mbu otu Everton agaghị abịa na Goodison Park. Na Zouma, Michael Keane na Yerry Mina ihe nile dị n'ihu ya na ntinye ụzọ, ohere dị obere maka nwaafọ Igbo.
Mason Holgate Biography- Ya Bilie Akụkọ Mere Eme
Dị ka ihe ka ọtụtụ na-eto eto na-eme, Mason gara n'ihu inweta ahụmịhe ọzọ iji wee gbalịsie ike ịnọ n'ọnọdụ mbụ nke ndị Everton. O sonyeere ndị otu egwuregwu West Bromwich Albion na mbinye ego ebe ọ kwụrụ ụgwọ ya EGO site n'inyere ha aka ime nke ọma na 4 na-abịa na asọmpi egwuregwu-Championship.
Akụkụ kachasị echefu echefu Mason Holgate's biography bịara gburugburu Ọktoba 2019, oge o mechiri ebe obibi na-adịgide adịgide Everton malite XI. Mason Holgate bilitere n'ememe ahụ ọtụtụ oge, otu nke hụrụ ka ọ na-etinye ihe mgbaru ọsọ mbụ Toffees na oge 2019/2020.
Oge 2019/2020 bụ n’ezie, oge echefukarịrị maka Masey. Ebe E Si Nweta: Egwuregwu MirrorFootball
N'oge edere, a na-ewere Mason dị ka onye England ga-abụ onye ọdịnihu ma hụkwa ya Carlo Ancelotti's nhọrọ kachasị mma ugbu a na-agbachitere. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gosighi ụdị ọkụ ahụ dịka John Stones mere, KUTTA ya n'akụkụ Tyrone Mings A na - ahụta nkwa dị mma na - esote nke nchekwa Atọ ọdụm. Oku England a na-akpọ Holgate na-aga n'ihu na-akpọ oku, ma ugbu a, a na-atụgharị ya ka ọ bụrụ onye England mbụ ga-apụta n'okpuru ya Gareth Southgate. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Mason Holgate Nwanyi nwanyi?
Site na mmụba ya na ama, o doro anya na ma ndị egwuregwu bọọlụ nke Everton na ndị Bekee amalitela ịtụgharị uche na ịmara onye nwanyị nwanyị Mason Holgate nwere ike ịbụ. Enweghị agọnarị eziokwu ahụ nwere na mma nwa ya mara mma tinyere ụdị egwuregwu ya agaghị etinye ya dịka A-lister maka ụmụ nwanyị nwere ike ịlụ na ndị bụ nwunye. Chọta n'okpuru azịza kacha nso anyị nwere maka ajụjụ gị gbasara enyi nwanyị Mason Holgate. Aha ya bụ Pia Mia.
Ọtụtụ ndị Fans ajụọla- -nye bụ Mason Holgate Nwanyị nwanyị? Nke a bụ azịza anyị kachasị nso. Ebe E Si Nweta: DailyMail na IG
Pia Mia bụ onye na-agụ egwú America, onye na-ede abụ, onye na-eme ihe nkiri na ihe osise Instagram. Mmekọrịta Mason na Pia Mia n'oge ndị na-adịbeghị anya enwetabeghị nyocha nke anya ọha. Na nso nso a, A hụrụ ka kpakpando Everton nọ na Pia Mia dị egwu na Dubai mgbe ọ nọ obere ezumike, egwu nke kpalitere r.asịrị. N’okpuru bụ ebe kacha nso anyị nwere ike ị nweta.
Masey na enyi nwanyị ya na-ekwu okwu Pia Mia nwere obi ụtọ na ịchọ ọdịmma onwe ha na klọb n'abalị Dubai. Ebe E Si Nweta: TheSun
Na vidiyo dị n'okpuru ebe a, a hụrụ onye na - agbachitere onye England na - ekpori ndụ a chawa mmiri ịchafụ ma si na karama mmanya zoro ezo na ihe ngosi di egwu. Ihe onyonyo a (nke di n’okpuru) putara na otutu vidio mgbasa ozi nke bulitere site n’egwu bu oria n’onyere ihe kariri nde mmadu ise na Instagram.
Mason Holgate Ndụ nke Onye
Nabata na akụkọ ndụ gbasara Mason Holgate. Na mpaghara a, ị ga-ama ihe onye ọdịnihu England ga - eme n'egwuregwu ahụ. Nke mbu, na-adighi anya site na olulu ahu, Mason nwere nkwanye ugwu oma, enyi na enyi mana nke kariri, zuru ike.
Bọọlụ bụ egwuregwu mmadụ, nke anyị na-atụ anya ịhụ ihe mgbaru ọsọ. Mana ọ na-eju ọtụtụ ndị egwu ịhụ ka ndị egwuregwu na-erute nso na egwuregwu ahụ. Ma Mason na Tom Davies emeela ihe ndị ọzọ iji soro ụwa niile kerịta ihe ngosi ha.
Eziokwu Ndụ Mason Holgate. Ebe E Si Nweta: Instagram
Nke ato, na ndu ndi mmadu nke edeputara n’elu, amara ndi Mason Holgate ka amara amara ya. Ọ na-ewepụta oge iji leta ndị egwuregwu nwere ndị nwere onyinye na kwa, na-eso ndị otu egwuregwu n'ụlọ ọgwụ ịga leta ndị egwuregwu na-arịa ọrịa.
Nke ato na ndu nke Mason Holgate, obu onye n’eme ihe kariri mmega ahu choro iji mee ka o sie ike. Dị ka onye agbachitere mara mma ma dị nro, ọ na-ezere ikpe ya site na anya ya dị mfe, yabụ na ị na-emega ahụ siri ike. Na ngwụcha na ndụ ya, Mason na -enwe oge dị mma iji soro onye yiri nwa ya nwoke na mmekọrịta mbụ.
Mason Holgate Ihe Ezinụlọ
Na-amalite, ndị ezinaụlọ Mason Holgate (nke a sere n’okpuru ebe a) kpọrọ onwe ha “Team“. Emi owụt ke mmọ ẹnen̄ede ẹkpere kiet eken. Na ngalaba a, anyị ga-awụnyekwu ọkụ na ndị niile so na nne na nna Mason Hogate.
Dabere na Liverpool Echo, Mason gosipụtara otu oge na nne ya ka na-eti ya okwu na ọ nwere ike ịbụ onye na-adọ aka ná ntị. Ọzọkwa, onye nne kachasị mma (nke a na-ese foto n'okpuru) yikarịrị ka ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu na ntụkwasị obi nke nwa ya n'agbanyeghị ọdịdị dị nro ya.
Ezinaụlọ Mason Holgate na-akpọ onwe ha TEAM na mama ya yikarịrị ka ọ̀ ga-abụ onye na-adọ aka ná ntị.Credit: Instagram
Mason kpughere ozi banyere mama ya mgbe ọ zutere ụmụ akwụkwọ St Anne Stanley Primary School na Old Swan (Liverpool dị n'ime obodo) gburugburu Jenụwarị 2017.
Tony Holgate bụ ezigbo nna dị jụụ nke a na-ahụkarị na ndị mgbasa ozi na-ekwu maka arụmọrụ ya. 'Ll ga ekwenye anyị na nna nna Mason Holgate bụ ihe na-achị achị, ihe kpatara nwatakịrị ya jiri nwee agba ma ọ bụghị ọdịdị ya.
Zute Ndụ Ezinaụlọ Mason Holgate- Nke a bụ nna nna ya buliri elu, Tony Holgate. Ebe E Si Nweta: Twitter
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka foto nwata ahụ a gosipụtara na nzụlite ezinụlọ Mason Holgate nke edemede a, anyị ga-ama na ị maghị na Tayler bụ nwanne nwanyị nke okenye maka Mason. N'ịdị mma n'anya Mason Holgate mara mma, ọ dị mfe maka ndị fans iche na ọ ga-enwe nwanne nwanyị mara mma (na Tayler) onye kwesịrị ka etolite. Ih, ekikere fo ama enen. Tayler mara mma nke ukwuu.
Nwanne Nwanyị Mason Holgate Tayler ji nnọọ mpako ihe nwanne ya nwoke ghọrọ. Ebe E Si Nweta: IG
Nwanne Mason Holgate Tayler mara mma nke na-eweta ntụkwasị obi na ọnya ọ bụla Instagram. Ọ bụ onye anaghị achọ ọdịmma onwe ya nke na-enyere nwanne ya nwoke ọfụma ọbụlagodi na ọ pụtara itinye ndu ya.
Mason Holgate si ebi ndụ
Ndụ Mason Holgate anyị ga - enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ. Na-ekpebi site na foto dị n'okpuru, ị ga-ekwenye na Mason Holgate n'ezie, ọ dị mma. dị jụụ ma gbakọta ọnụ ọgụgụ. Lotsme otutu ego maka ịgba bọọlụ bụ ihe dị mkpa. Ihe ka adọrọ adọrọ bụ etu Mason siri kwekọọ na agba ya na nke uwe mkpuchi ya. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke ndụ ya dị mma ma dị oke egwu.
Nke a bụ ụgbọ ala Mason Holgate- balgba bọọlụ mara mma hụrụ n'anya na-eyi uwe iji kwekọọ n'ụgbọ ya. Ebe E Si Nweta: Everton
Mason Holgate Enweghi ike Facts
Eziokwu nke 1: Mason Holgate Mmebi ụgwọ ọnwa
Dị ka n'oge edere, nkwekọrịta onye na-agbachitere ya na Everton na-ahụ ya ka ọ na-enweta ego maka ya £ 1,300,000 kwa afọ. Nke a na - eme ya onye nde. Na -emechi ụgwọ Mason Holgate na ọnụ ọgụgụ miri emi, anyị nwere ihe ndị a;
Mgwọ ọrụ Mason Holgate na Pound sterling
Kwa Afọ £ 1,300,000
kwa ọnwa £ 100,000
Kwa .bọchị £ 3,371
Kwa elekere £ 148.8
Kwa Nkeji £ 2.48
Sekọnd £ 0.041
N'ihe ngosi dị n'okpuru, anyị amụbala ụgwọ Mason Holgate na sekọnd ọ bụla nke malitere ịgụta oge obula peeji a mepere.
Nke a bụ ego ole Mason Holgate ritere kemgbe ị malitere ilele Peeji a.
Ọ bụrụ na ndị £ -Ọ pụtara na ị na-elele ihe Peeji nke AMP. ugbu a Pịa EBE A earnhụ ego erite na Mason Holgate na-enweta ego kwa nke abụọ. Ị maara?… Ọ ga-ewe onye ọrụ gbago na UK ọ dịkarịa ala afọ 3.2 irite otu a Masey na-akpata na 1 ọnwa.
Mason Holgate bụ ezigbo ihe nchebe maka onye ọ bụla FIFA na - achọ chọrọ ịmalite ọrụ ha na otu ọkacha mmasị ha. Foto dị n'okpuru ebe a, ọ bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-agbachitere kachasị mma na FIFA nke nwere ọkwa dị elu.
Ngwakọta FIFA ya na-egosi na Masey bụ onye ọkpụkpọ maka ọdịnihu. Ebe E Si Nweta: SoFIFA
Obi siri anyị ike na Holgate ga-akacha nke ya mma 82 akara akara etinyero ya n’egwuregwu bọọlụ simulation.
Mason Holgate natara ịdọ aka ná ntị ederede site n'aka England FA. E nyekwara ya iwu ka ọ gaa mmemme izizi maka tweet ọ zitere mgbe ọ nọ 15 na 16, otu nke o jiri asusu di iche. Mason Holgate n'oge ahụ ziputara azịza ndị enyi ya na Twitter, nzaghachi gụnyere okwu dịka “fa * g ”,“ fag * gottttttt ”na“ nwa nwoke nke agha".
Nyere na ọ bụghị okenye tozuru etozu n'oge ahụ, ndị England FA bịara nwee ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ị maara?…, Ndị na-asọrịta mpi na-egwupụta akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta nke Mason Holgate maka ngosipụta nke ọzụzụ a ka esemokwu ya na Roberto Firmino. Ihe a mere na otu n'ime FA Cup were iwe iwe na agba nke atọ.
Akụkụ ọzọ nke Masey ikekwe ị maghị. Ebe E Si Nweta: BBC
Eziokwu # 4: Mason Holgate's egbugbu
Ogbugbu egbugbu bu ihe ama ama n’ụwa egwuregwu taa. Ndị egwuregwu bọọlụ nke oge a na-ejikarị ya akọwa okpukpe ha ma ọ bụ ndị ha hụrụ n'anya. Masey nke anyi oge ede bu nke anaghi eche. Foto dị n'okpuru ebe a, enweghị isi ọ bụla na ahụ ya.
Mason Holgate's Tattoo Eziokwu- Masey nke aka anyị bụ enweghị egbugbu. Ebe E Si Nweta: Tony McArdle - Everton FC
Ndị mụrụ Mason Holgate mgbe a mụrụ ya nyere ya aha Ndị Kraịst “Anthony"Zụlitere ya ịnabata okpukperechi nke Kraịst. Ị maara?… Aha etiti ya “Anthony”Bụ aha Ndị Kraịst bịara n'ihi nsọpụrụ nke St Anthony Onye Ukwu, onye hiwere okpukpe monastic. Nke a pụtara na ndị mụrụ Mason Holgate ga-abụrịrị zụrụ ya onye Katọlik.
Nkwubi okwu anyi banyere Mason Holgate's Biography na ewetara gi ihe omuma ya nke Wiki. Foto dị n'okpuru ebe a, ọ na - enye gị ozi gbasara gị ngwa ngwa na ụzọ dị mfe.
Aha n'uju: Mason Anthony Holgate
aha otutu: Masey
Ụbọchị ọmụmụ: 22 Ọktoba 1996 (afọ 23 dị ka nke abụrụ na Feb 2020)
Ebe ọmụmụ: Doncaster, England
Ndị nne na nna: Tony Holgate (Nna). Aha nne nne n'oge a na-ede akwụkwọ
Nwanne Tayler Holgate (Nwanna Nwaanyị)
Ebe ezinụlọ si: Jamaica
Ọrụ ntorobịa: Barnsley
elu: 6 ft 0 na (1.84 m
Nwa nwanyi: Pia Mia (Rumoor)
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Mason Holgate Childhood Story Plus Uzo nke Utold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Nwere ike 14, 2018